Air Madagascar : Mibaby trosa 72 tapitrisa dolara
mercredi, 13 octobre 2021 09:57
Nivoitra io nandritra ny fivoriana ho fanomanana ny fisokafan'ny sisintany, notarihin’ny filoha Andry Rajoelina tao amin'ny Lapam-panjakana Ambohitsorohitra, izay niarahany tamin'ny Minisitry ny Fizahantany, ny Minisitry ny Fitaterana ary ireo tompon’andraikitra eo anivon'ny Kaompaniam-pitaterana Air Madagascar.
Mikasika ny zotra anabakabaka manokana dia nodinihina nandritra izao fihaonana izao ny momba ny fanarenana ity orinasam-pitaterana anabakabaka Air Madagascar mibaby trosa mitentina 72 tapitrisa dolara nandritra ny fiaraha-mitantana tamin'ny orinasa Air Austral.
Anisan'ny anton'izany ny tsy fifehezana ireo fandaniana teo amin'ity orinasam-pitaterana ity, toy ny hofan'ireo fiaramanidina ATR izay avo roa heny ny tokony ho izy, eo ihany koa ny fandaniana eo amin'ny lafiny fitantanana na "coût de gestion".
Ny tanjona momba ny Air Madagascar hoy ny Filoha Andry Rajoelina dia ny hametrahana eo anivon’ity orinasa ity ny fahalavorarian'ny asa, ny fahamarinan-toerana sy fahamatorana eo amin'ny tolotra omena, ary ny fanajam-potoana.
Ankoatra ny fitantanana ara-bola eo amin'ity orinasa ity dia mila jerena akaiky ihany koa ny "digitalisation" amin'ny fitantanana amin'ny ankapobeny sy ny fanjifana ireo tapakilam-pitaterana, hoy hatrany ny Filoha.
Anisan'ny hodinihana sy handraisana fanapahan-kevitra mandritra ny Filankevitry ny Minisitra anio koa, hoy ity farany, ny lafiny ara-pahasalamana sy ara-teknika momba ny fisokafan'ny sisintanin'i Madagasikara.
Ombivavy be ronono nafarana : Atokana-monina 35 andro ao Andranomanelatra
Fanondranana jirofo : Faharoa eran-tany aorian’i Indonezia i Madagasikara »